Khokha Isikweletu Sakho. Ulwazi Lwezezimali Zabafundi »IHodges University
Uyemukelwa kwa-Student Financial Services
IHhovisi laseHodges University of Student Financial Services linikeza ongoti abazinikele ukukusiza ngosizo lwezezimali, ama-akhawunti abafundi, kanye nezixazululo zezincwadi.
The mission yeHhovisi Lezinsizakalo Zezezimali Zabafundi kumele ligxile empumelelweni yezezimali zabafundi ngenkathi lihlinzeka ngezinga eliphezulu lenkonzo nethuba elilinganayo ekunikezelweni kwezimali. Sandisa amathuba okufinyelela nokukhokhela ngokunikeza ulwazi olunembile lwezezimali kanye nokuholwa okukodwa nokusekelwa kwabafundi nemindeni endaweni ehlanganisa ukusebenzisana nokubambisana.
Imininingwane Yezokuxhumana Yezezimali
Ukuze ufunde kabanzi mayelana Usizo lwezezimali, njengezimali mboleko zabafundi ezizimele / ezizimele, izibonelelo zikahulumeni / zombuso, i-FAFSA, nokuqinisekiswa kwe-FA:
Ucingo - (239) 938-7758
Ifekisi - (239) 938-7889
I-imeyili - finaid@hodges.edu
Ngemininingwane maqondana ne- Ama-Akhawunti Esitshudeni, kufaka phakathi izindleko zokufunda / zokukhokha, izinkokhelo, izinhlelo zokukhokha, ukukhokhisa okuvela eceleni, ukubuyiselwa kwemali, amafomu ayi-1098-T, njll.
Ucingo - (239) 938-7760
I-imeyili - sas@hodges.edu
Ngosizo nge Izixazululo Zezincwadi, okufana nezinto zokufunda (izincwadi zomzimba, ama-e-izincwadi, amakhodi wokufinyelela), imali yezinsizakusebenza, kanye nokuqinisekiswa kwe-oda:
Ucingo - (239) 938-7770
I-imeyili - universitystore@hodges.edu
Ama-FAQ wemali ekhokhwayo yemithombo yaseHodges University.
Intengo yamanje yezinsizakusebenza
Udinga Ukwenza Inkokhelo?
Khokha imali yokufunda kanye nezimali zakho
Online - Izinkokhelo zingenziwa ngekhadi lesikweletu (i-MasterCard, i-VISA, noma i-Discover) noma ngesheke ngogesi ngokuya ku myHUgo.
Mail - izinkokhelo zesheke zingathunyelwa nge-imeyili ku-Office of Student Financial Services, 4501 Colonial Blvd. Fort Myers, FL 33966. Sicela ufake inombolo yakho ye-ID yomfundi esheke. Sicela ungathumeli imali ekhokhelwa ukheshi (siyakwamukela ngenjabulo ukukhokhelwa kwemali mathupha).
Hambayo - ikhadi lesikweletu (i-MasterCard, i-VISA, noma i-Discover) noma izinkokhelo zesheke ngogesi zingenziwa ngokushayela (239) 938-7760.
Mathupha - yenza ikhadi lesikweletu (i-MasterCard, i-VISA, noma i-Discover), isheke, noma ukukhokha imali ngokuya e-Office of Student Financial Services esemakhampasi aseNaples noma eFort Myers.
Izinhlelo zokukhokha nokufunda nezimali ziyatholakala kubafundi bamanje baseHodges University. Izinhlelo zokukhokha zingafaka izindleko zokufunda, imali ekhokhwayo yohlelo / umahluko wezifundo, imali yokufunda, imali yebhodi, nezinye izimali eziyimpoqo. Sicela uxhumane nesazi se-akhawunti yezitshudeni ngaphakathi kweHhovisi Lezinsizakalo Zezezimali Zabafundi ngokushayela ku (239) 938-7760, ngokuthumela i-imeyili sas@hodges.edu, noma uvakashele amakhampasi ethu aseNaples noma eFort Myers ukuze ufunde kabanzi ngezinhlelo zokukhokha.
Izinsuku Zokukhokhwa Kwezemfundo
Zonke izinkokhelo zifuneka, ngokugcwele, ngosuku lokuqala lwesigaba sokuqala esikhathini esiyizinyanga ezi-4 noma ukubhaliswa kwezinyanga eziyi-6 (UPOWER ™ kuphela). Ngeminye imininingwane, sicela ubheke ngezansi.
Uma usebenzisa uhlelo lokukhokha, sicela uthintane nochwepheshe we-akhawunti yomfundi mayelana nezinsuku ezifanele zokukhokha ngakunye.
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Izinkokhelo zikhokhwa ngesikhathi esinqunyiwe ukuthi ngabe usithola noma cha isitatimende ngaphambi kosuku olubekiwe.
Imininingwane yokubuyiselwa kwemali
Abafundi Abathola Usizo Lwezezimali
Abamukeli bosizo lwezezimali kumele ama-akhawunti abo abuyekezwe futhi avunyelwe yiHhovisi Lezinsizakalo Zezezimali Zabafundi ngaphambi kokukhishwa kwemali mbuyiselo. Uma usizo lwezezimali lulungiswa, ungahle ukhokhelwe ukubuyiselwa kwemali okunikezwe uMnyango Wezemfundo waseFederal noma uMnyango Wezemfundo waseFlorida ngokuya ngenani losizo lokuqala olukhishiwe.
Ukulungiswa kosizo lwezezimali kungaba ngumphumela wokushintshwa kwamahora wesikweletu, ushintsho ekufanelekeni komfundi ukuthola izinhlobo ezithile zosizo, noma ukwehluleka ukuhlangabezana ne-Satisfactory Academic Progress (SAP).
Abafundi abathola usizo lwezezimali oluhlanganiswe yiTitile IV yoMthetho Wezemfundo Ephakeme ka-1992 abahoxisa ngokusemthethweni bazothola imbuyiselo ngokuya ngokuchibiyelwa kweMfundo ePhakeme yonyaka we-1998. IHodges University izonquma ukuthi yiluphi usizo lwe-Title IV umfundi alutholile angalutholanga ngaleso sikhathi wokuhoxa okuphelele. Inani losizo olutholwayo lubalwa ngesisekelo esihluziwe.
Ulwazi Lokubuyiselwa Kwezifundi
Ukuhoxisa noma Ukuyeka Izifundo
Umfundi angahoxa nganoma yisiphi isizathu futhi unesibopho sokuqedela izinqubo ezisemthethweni zokuhoxiswa kweNyuvesi njengoba kuchaziwe kuNqubomgomo Yokuhoxa. Ngaphezu kwalokho, uma umfundi ebhaliswe ngengosi yezempi eku-inthanethi, kungumsebenzi womfundi ukuthi ahoxe ngaleyo ngosi yezempi eku-inthanethi.
Ukuhoxa kuthathwa njengokwenzeka ngosuku umfundi aletha ngalo ngokusemthethweni ifomu lokuhoxiswa noma ngosuku iNyuvesi enquma ngalo ukuthi umfundi wayeka ukuya noma wehluleka ukuhlangabezana nezinqubomgomo zezemfundo ezishicilelwe futhi wahoxiswa ngokomthetho, kuye ngokuthi yikuphi okuza kuqala.
Ngemininingwane engaphezulu mayelana nezinqubomgomo zokuhoxa kweNyuvesi, sicela ubheke ifayela le- Ikhathalogi Yenyuvesi.
Njengoba inkambo ngayinye iqala isikhathi sokuqala kwenyanga yakho (isikhathi sezinyanga ezi-4), ukufaneleka kwakho kosizo lwezezimali kuzohlolwa ngokuya ngesimo sakho sokubhaliswa ukuthola ukuthi ngabe ukhishwa nini / nini usizo lwezezimali nokuthi ngabe / lapho umfundi ezobuyiselwa imali. Isimo sokubhaliswa komfundi sisekelwe emahoreni esikweletu abhalise kuwo ngenkuthalo.
Abafundi kufanele bazi ukuthi ngeke bathole imbuyiselo kuze kube konke izindleko zokufunda nezemali zikhokhelwe ngokuphelele. Imali yokuqala ukwedlula yonke engakhishwa ku-akhawunti yesitshudeni izoba okungenani izinsuku ezingama-32 ngemuva kokufundelwa futhi izindleko zokukhokhwa zikhokhwe ngokuphelele.
Sicela ubheke umhlahlandlela wesimo sokubhalisa ngezansi ukuze ubuyekeze usizo lwezezimali ukufaneleka kususelwa kumahora wesikweletu asebenzayo:
Isikhathi Esingaphansi Kwesigamu Sesikhathi Isikhathi Esigcwele Isikhathi Isikhathi Isikhathi esigcwele
Amahora wesikweletu asebenzayo 1 - 5 6 - 8 9 - 11 I-12 noma ngaphezulu
I-Federal PELL Grant * Ible Kufanelekile Ible Kufanelekile Ible Kufanelekile Ukufaneleka Okugcwele
I-Federal SEOG * Ayisebenzi Ible Kufanelekile Ible Kufanelekile Ukufaneleka Okugcwele
Isibonelelo se-State EASE * Ayisebenzi Ayisebenzi Ayisebenzi Ukufaneleka Okugcwele
Isimo FSAG * Ayisebenzi Ayisebenzi Ayisebenzi Ukufaneleka Okugcwele
Imali mboleko kahulumeni Ayisebenzi Ukufaneleka Okugcwele Ukufaneleka Okugcwele Ukufaneleka Okugcwele
* Kuya ngokufaneleka komfundi kosizo lwezezimali / lombuso.
Uyacelwa ukuthi ubheke imininingwane yosuku lwembuyiselo nemali yosizo lwezezimali ekhalendeni lemicimbi yabafundi ku myHUgo.
Thola Okwengeziwe Ngosizo Lwezezimali
1098 - Amafomu
Izinzuzo Zentela Yemfundo Ephakeme, Kusetshenziswa Ifomu Lentela le-1098-T
I-American Opportunity (phambilini eyayiyiThemba) namakhredithi entela e-Lifetime Learning angatholakala kuwe uma ukhokha izindleko zemfundo ephakeme. Ukukusiza ukuthi ufune la makhredithi, iHodges University izofaka ifomu lentela le-1098-T kwa-Internal Revenue Service (IRS) ngoMashi 31st unyaka ngamunye.
Lolu lwazi alumele neze izeluleko zentela ezivela enyuvesi, ngoba kungumsebenzi womkhokhi wentela ukunquma ukufaneleka kwesikweletu. Uyacelwa ukuthi ungaxhumani neHodges University maqondana nezeluleko zentela zalesi sikweletu. Ukuthola eminye imininingwane nge-American Opportunity and Lifetime Learning credits, sicela ubheke Ukushicilelwa kwe-IRS 970 - Izinzuzo Zentela Yemfundo Ephakeme noma uthinte abakwa-Internal Revenue Service ngqo ku (800) 829-1040. Ngemibuzo ethile maqondana nemininingwane enikezwe ngaphakathi kwefomu lentela le-1098-T, sicela uxhumane neHodges University ku (239) 938-7760.
Ama-FAQ wemali engu-1098-T
Inkokhelo yenkampani yangaphandle
Lapho inhlangano, okungeyona eyomfundi noma amalungu omndeni wayo, izibophezela ukukhokha izindleko zokufunda zomfundi, babhekwa njengomxhasi ovela eceleni yiHodges University. Lapho ukukhokha kufanele ku-akhawunti yomfundi, umxhasi ukhokhiswa yiNyuvesi. Le nqubo yokukhokha ibhekwa njengokukhokhisa okuvela eceleni.
Izinkokhelo zabaxhasi zingaphansi kwezidingo ezifanayo zokubika zikahulumeni njengolunye usizo lwezezimali. Olunye uxhaso aludingi i-invoyisi yokukhokha futhi lwenziwa yunivesithi ngeHhovisi Lezinsizakalo Zezezimali Zabafundi.
Noma ngabe ungumfundi noma ungumxhasi, uzothola izimpendulo emibuzweni evame ukubuzwa (ama-FAQ) mayelana nokuthi ukukhokhiswa komuntu wesithathu kusebenza kanjani nokuthi izinkokhelo zenziwa kanjani. Uma unemibuzo eyengeziwe noma udinga eminye imininingwane, sicela uxhumane neHhovisi Lezinsizakalo Zezezimali Zabafundi ku (239) 938-7760 noma sas@hodges.edu.
Imibuzo evame ukubuzwa yenkokhelo evela eceleni yabaxhasi
Imibuzo evame ukubuzwa ekhokhiswa yizinkampani zangaphandle
IBankMobile, iDivision of Customers Bank, icubungula ukubuyiselwa kwemali kosizo lwezezimali eHodges University kanye nezinye izikhungo zemfundo ephakeme kulo lonke elaseMelika. Ngeminye imininingwane ngeBankMobile, Vakashela lesi sixhumanisi.
Chofoza lapha ukubuka inkontileka yesikhungo sethu neBankMobile, iDivision of Customers Bank.